Barattoonni Yunivarsiitiiwwan Amboo, Gondariifi Woldiyaa mormiirra jiru - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright facebook/adigratuniversity
Walitti bu'insa Jimaata darbe Yuunvarsiitii Addigraatitti barattoota gidduutti uumameen, muddamni guyyootaaf itti fufee barattoonni Yuunvarsiitiiwwan Waldiyaa, Gondariifi Amboo mormii dhageessisaa akka jiran odeeffannoon yuunvarsiitota kanarraa arganne ni mullisu.
Walitti bu'insa Jimaata ALH Sadaasa 29, 2010 Yuunvarsiitii Addigiraatitti uumameen barataan tokko akka du'e, ooggantoonni yuunivarsiitichaafi itti gaafatamaan komunikeeshinii naannoo Amaaraa beeksisanillee barattoonni garuu lakkoofsa kanaa ol guddisanii himu.
Dabalataanis barattoonni lakkoofsi isaanii hinbeekamne miidhaan irra ga'ee mana yaalaa geeffamanii wallaansa argataa akka jiran himameera.
Walitti bu'insi kun kan ka'e, wayita barattoonni ayyaana sabaa, sab-lammootaafi uummattootaa osoo kabajaa jiran, barattoonni lama walitti bu'uu isaaniitiin. Walitti bu'insi sadarkaa olaanaatti ce'uun gareedhaan hiramanii dhagaa walitti darbachuun akka eegalame, daayirektarri kutaa sab-qunnamtii Yuunvarsiitii Addigiraat Yohaannis Kabbadaa ibsaniiru.
Sa'aatiiwwan muraasaan booda humni nageenyaa seenee tasgabeessuu Obbo Yohaannis dubbatanis, ammallee yuunivarsiiticha keessa dhiphina hedduutu jira.
Kanumarraan itti fufee Yuunvarsiitii Waldiyaatti, Dilbata galgala jeequmsiifi walitti bu'insi jalqabee gara alkanii xiqqoo tasgabbaa'ee Wixata ganama garuu irra deebiyee ka'uudhaan barattootarra miidhaan ga'uun barattoonni akka maqaan isaanii hin dha'amne barbaadan dubbisne nutti himaniiru.
Haaluma walfakkaatuun Yuunvarsiitii Gondarittis, barattoonni mootummaa abaaraa mormii akka dhageessisan barattoonni nutti himaniiru.
Akkasumas Yuunvarsiitii Ambootti miidhaa barattoota Yuunvarsiitii Addigiraatirra ga'e mormuudhaan, mooraa guddaa keessatti har'a (Wixata) mormii dhageessisaa kan jiran yommuu ta'u, barumsas akka dhaaban barattoonni dubbisne nutti himaniiru.
Mooraa biraa keessatti garuu wanti uumame akka hin jirreefi barumsis itti fufee ooluunsaa himameera.
Walitti bu'insa Yuunvarsiitii Addigiraatitti uumameen barataan lubbuun isaa darbe barataa Habtaamuu Yaaloo Sinnishaaw kan jedhamu, barataa Manaajimentii waggaa 2ffaa ta'uun isaa mirkanaa'eera.
Reeffi barataa kanaas, gara maatiisaatti akka geeffame, itti gaafatamaan Komunikeeeshinii Naannoo Amaaraa ibsaniiru.
Obbo Yohaannis Kabbadaa Daayirekterri Sab-qunnamtii Yuunvarsiitii Addigraat "Walitti bu'insa kanaan booda barattoonni mooraa gadi lakkisuuf gaafatanii turan. Dubbichi akka tasgabbaa'uu danda'uufi jaarsoliiniifi abbootiin amantaa akka gidduu seenan taasifneerra," jedhan.
Waanti jiru akka tasgabbaa'e kan dubbatan Obbo Yohaannis, barumsi jalqabeera jedhanii nutti himanillee, barattoonni dubbisne sodaa keessa akka jiraniifi barumsa akka hin jalqabiin ibsaniiru.
Yuunvarsiitichis eegumsa poolisii federaalaa jala kan jiru yommuu ta'u, barattoonni hedduun gara maatii isaaniitti galuu akka barbaadan himaniiru.
Maatiiwwan yuunivarsiiticharraa fagoo jiranis yaaddoo cimaa keessa akka jiraniifi mootummaan "nageenya ijoollee isaanii eegsisuu hin danda'u yoo ta'e gara mana isaaniitti deebisuu qaba," jechuun haati ilmi isaanii yuunvarsiitii barattu jiraataa Dassee ta'an tokko dubbataniiru.